XOG CULUS: Liiska xildhibaanada Aqalka Sare ee Galmudug, Xisbiyadooda & Beelaha ay kasoo jeedaan [SAWIRRO] - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa soo gabagaboobay doorashada xubnaha Aqalka Sare ee Baaralamaanka Soomaaliya kasoo galaya maamulka Galmudug oo ka koobnaa 8 xubnood.
Doorashada oo ahayd tii ugu horeysay ee ka dhacda Soomaaliya, waxay ku qabsoontay jawi degan oo Baarlamaanka Galmudug si hufan uga soo dhalaalay kaalintiisii, waxaana ku soo baxay 8 xildhibaan.
Hadaba waxaa halkan idinku soo gudbineyna magacyada xubnaha Aqalka sare ee Galmudug metalaya iyo beelaha ay ka soo jeedaan iyo kooxaha siyaasadeed ee ay taageersan yihiin:-
Maxamed Axmed (Abshir Bukhaari) Kursiga Beesha reer Xaaji Saleebaan H/gidir – Waa ganacsade raadraac saxafi leh, hore u soo noqday gacan-yarihii Madaxweyne Sheekh Shariif, wuxuuna ka tirsan yahay kooxda Aala-sheekh.
2- Jen. Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid — Beesha Sacad H/gidir – Waa madaxweynihii hore ee Galmudug iyo hogaamiye kooxeed hore, wuxuu hore u soo noqday taliyihii hore ee Booliska Soomaaliya- taageero ahaan wuxuu taageersan yahay madaxweyne Xasan Sheekh, inkastoo aanu ka mid ahayd kooxda Damjadiid
3- Cabdi Axmed Dhuxulow (Dhegdheer) — Murusade – Waa xildhibaan hore iyo ganacsade siyaasadeed, wuxuu isbaheysi hoos kula jiraa madaxweyne Xasan Sheekh, taasoo keentay inuu xilkan ku soo baxo.
4-Yuusuf Geelle Ugaas — Beesha Duduble – Waa xildhibaan hore, soona noqday wasiir ku xigeen dowladii KMG ahayd, haddana wuxuu gacan-saar la leeyahay Xasan Sheekh.
5- Zamzam Dahir Maxamuud — Beesha C/raxmaan Saleebaan Waceysle – Waa xubin ka tirsan xisbiga PDP ee Xasan Sheekh
6- Jawaahir Axmed Cilmi — Beesha Cayr H/gidir – Waxay ahayd xildhibaan ka tirsan federaalka oo gacan-saar la leh madaxweyne Xasan Sheekh.
7- C/waaxid Cilmi Goonjeex — Beesha Mareexaan. Waa siyaasi, soo noqday wasiir iyo kusime Ra’iisal wasaare, waana shaqi dhexdhexaad ah.
8- Abuukar Axmed Xaashi — Beesha Dir – Waa xubin ku cusub siyaasadda oo madax bannaan.
Cunsuriyiinta Mareykanka oo doonayey ineey qarxiyaan guryo soomaalida dagan tahay oo la qabtay